Madaxweyne Biden ”Sacuudiga waa inuu ilaaliyaa xuquuqda Aadanaha” | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Madaxweyne Biden ”Sacuudiga waa inuu ilaaliyaa xuquuqda Aadanaha”
Washington (Halqaran.com) – Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qadka taleefanka kula hadlay boqorka Sacuudiga Salmaan, isagoo doonaya in uu xiriir cusub la yeesho boqortooyada Sacuudiga.
“Wuxuu ku booriyay sacuudiga ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta sharciga”, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Aqalka Cad.
Wada-hadalka dhex-maray labada mas’uul, ayaa waxa uu ku soo aadayaa markii Mr Biden la sheegay in uu aqriyay war bixin soo socota oo Mareykanku soo saaray taasoo ku saabsan dilkii loo geystay suxufigii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi.
Warbixinta ayaa la filayaa in ay muujiso ku lug lahaanshaha dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Maamulkii Madaxweyne Trump ayaa diiday in la sii daayo war bixintaan, isagoo ilaalinaya wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhaxeysa Sacuudiga iyo Mareykanka.
Bayaan ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Biden uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka.
Khashoggi oo ahaa Suxufi si weyn u dhaleeceeya dowladda Sacuudiga ayaa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbuul sanadkii 2018-kii, waxaana la sheegay in jirkiisa la jarjaray.
Mas’uuliyiinta Sacuudiga ayaa waxa ay ku eedeeyeen geeridiisa howlgal been abuur ah oo ay sameeyeen koox loo soo diray in ay dib ugu soo celiyaan boqortooyada. Maxkamadda Sacuudiga ayaa shan qof oo lagu eedeeyey dilka wariyaha ku xukuntay min 20 sano oo xabsi ah bishii Sebtembar ee la soo dhaafay.
Ugu dambeyn, labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo Mareykanka iyo halista uga imaaneysa Sacuudiga kooxaha taageersan Iran, Mr Biden, wuxuu u sheegay boqor Salmaan “in uu ka shaqeyn doono sidii xiriirka labada waddan uu u noqon lahaa mid adag oo hufan intii suurtagal ah” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Aqalka Cad.
ilaainta Xuquuqda Aadanaha